Superstars Sweet Sins bịara na ndetu egwu na ọtụtụ egwu | Gam akporosis
Stọ Sins Superstars bụ egwuregwu ọhụrụ si na Madrid studio Platonic Games na nke na-abịa dị ka ọ dị na mbụ na ndị dị otú ahụ aesthetics maka gameplay na nko site na mbụ nkeji. A studio na-ewu ewu maka egwuregwu nke umi dị ka Obi ụtọ Hop ma ọ bụ Harmony.
N'ikwu ya, ha na-achọkarị izu okè n'ịgba egwuregwu ha site na iji ọgwụ dị mma na-akpọ ka «naanị» nke ahụ na-enyekwa egwuregwu ha “ọmịiko” pụrụ iche maka agwa ha na ihe omimi ha. Ka anyị jiri egwuregwu gam akporo ọhụrụ gị gaa.
1 Na ụda olu
2 Kpọọ ụdị egwu dị iche iche na Sweet Sins Superstars
3 Gwuo na ọkwa dị iche iche
Na ụda olu
Ihe ọhụrụ sitere na egwuregwu Platonic, na ị nwalekwala egwuregwu ha dika Harmon o Obi uto, na-eburu anyị tupu ụda egwu niile nke egwuregwu ha na nke anyị ga-eji protagonist iji kpochapụ ndị iro ahụ niile na kicks na egwu ndetu.
Egwuregwu nwere ọtụtụ egwu na ọtụtụ ụda egwu nke anyị nwere pịa bọtịnụ aka ekpe ma ọ bụ aka nri dị ka ihe egwu egwu na-abịa, nke ndị iro dị iche iche jikọtara, iji mepụta egwu ha.
Ọ bụ eziokwu na egwu adighi esi ike dika o di n’egwuregwu ndi ozo, ma Sweet Sins Superstars na-emesi ike nke ike nke a na-ekepụta site n'otu akụkụ gaa na nke ọzọ ka ọ ghara ida isi ihe ndụ nke onye protagonist anyị. Na ọ bụ na oge ọ bụla anyị dara, onye na-akwado anyị ga-ata ahụhụ ruo mgbe egwuregwu ahụ gwụsịrị.
Kpọọ ụdị egwu dị iche iche na Sweet Sins Superstars
Ọ bụrụ na anyị ekwuo na o sibeghị ike otú ahụ, ọ bụ n’ihi na ịpị ihe ndetu nke egwu anaghị esonyere ya dị ka a ga - asị na ọ na - eme n'egwuregwu ndị ọzọ. Ọ bụghị na ọ bụ asynchronous, mana ọ nweghị ọkụ ahụ a na-achọ n'egwuregwu ndị a. Ọ pụtaghị na ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ụdịrị dị ka Jpop, rock, electro swing ma ọ bụ ụlọ, yabụ jiri ekweisi na-enweta ọtụtụ egwuregwu.
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ egwuregwu egwuregwu Platonic ndị ọzọ, na Sweet Sins Superstars anyị ga-enwe ọmarịcha ihe ọtụtụ odide imeghe ma otu ihe ahụ na ụwa egwu ndị ga-eme ka anyị nwee ike ịgba egwu ka anyị na-egwu egwuregwu riri ahụ. Naanị ihe nwere ike ghara ịhazi atụmatụ nke ọma, ebe ọ bụ na ị ga-enwerịrị nka iji nwee ike ịmalite njem ahụ.
Echere m, ị nwere ike etinye batrị maka mkpịsị ụkwụ dị ogologo, pịa ugboro abụọ na bọtịnụ aka ekpe ka onye protagonist anyị na-agba ma ọ bụ gbalịa iwepu ndị isi ikpeazụ. A na-enwe ekele maka nkuzi a iji ghọta mmegharị na nka niile anyị nwere ike anyị na egwuregwu ọhụụ ọhụụ a.
Gwuo na ọkwa dị iche iche
Ọ na-ekele na ha tinye ụdị ihe isi ike atọ maka ọkwa ọ bụla. Anyị nwere ihe dị mfe, ọkara na ike, yabụ ọ bụrụ na ị hụ na ihe niile gbagwojuru anya, egbula oge ịgbanwe gaa na nke dị mfe iji nwee ọganiihu nke ọma ma chọpụta ihe niile na-echere gị na Sweet Sins Superstars.
En Ezigbo Mmehie Superstars anyị nwere ezigbo agwa ọma niile anyị ahụla n'egwuregwu ndị ọzọ n'ọmụmụ ihe a. Ikekwe imewe ahụ abụghị ihe "mara mma" dịka n'oge ndị ọzọ, mana ọ na - emezu ebumnobi nke ịdị n'ihu "egwuregwu" dị egwu maka egwu na eserese ahụ. Ọ bụghị otu n'ime egwuregwu Platonic kachasị mma, mana ọ bụ nke na-agbakwunyekwu na katalọgụ ọ nwere na Storelọ Ahịa Play na nke enwere ike ịnweta n'efu n'efu mgbe ọ bụla anyị chọrọ.
Superstars Sweet Sins bịara wee chọọ ka ọ bụrụ egwuregwu egwu kachasị amasị gị ma gaa gụọ egwu ndetu ndị ahụ na-ewepụ ndị isi ikpeazụ na ihe mgbochi niile ahụ ga-apụta n'ụzọ ị ga-ama. Have nwere ya n'efu na Storelọ Ahịa Play na freemium ahụ nke ka dị na mgbasa ozi na micropayments.
Ọ na-agbatị ọsọ ọsọ ma na-eburu ihe niile anyị ghọtara na Egwuregwu Egwuregwu, ọ bụ ezie na ọ naghị enye egwu ndị ahụ na njikọ egwu egwu egwu.
Usoro edemede: 5,7
Jiri anya gi na ndi odide gi
Dynamism na egwuregwu
Nnukwu nsogbu maka ọkwa mbụ
Mmehie dị ụtọ 2: Egwuregwu Rhythm
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Stọ Mmehie Superstars bụ egwuregwu ọhụrụ Platonic nwere ọtụtụ egwu egwu